Indawo yokutyela kunye nePizzeria Emåbaren | Tyelela uHultsfred
Indawo yokutyela kunye nePizzeria Emåbaren
ekhaya » Yitya usele » e » Indawo yokutyela kunye nePizzeria Emåbaren
I-Emåbaren yindawo yokutyela kunye nepizzeria. Ukutya okuphekwe ekhaya kuphakwe apha kwisidlo sasemini phakathi 1100-1400. Njengenye indlela yokutya kwanamhlanje, kukho ipitsa, iisaladi okanye kebabs. Isitya sanamhlanje siquka isalad buffet, iziselo ezibandayo okanye ibhiya elula kunye nekofu kunye nekhekhe. Wamkelekile
NgoMvulo: 08–20NgoLwesibini: 08-20NgoLwesithathu: 08-20NgoLwesine: 08-20NgoLwesihlanu: 08-20NgoMgqibelo: 08-20NgeCawa: 08-20
IJärnvägsgatan 5B, 570 81 UJärnforsen, Sverige
4 ngaphandle kwe-5.0
70 uphononongo kuGoogle
5/5 kwiveki ephelileyo
Trevlig personal och god mat med fullständiga rättigheter. Perfekt schnitzel..
Inkonzo elungileyo kakhulu kunye nabasebenzi abakhathalayo. Sasinabantwana aba-2 abadiniweyo nathi emva koko waqala ichannel yabantwana ukuze baphumle babukele iTV. I-barbecue ephekiweyo kunye nezitya ze-pizza Iyacetyiswa👍
5/5 3 kwiinyanga ezidlulileyo
Okona kutya kukuhle kumasipala waseHultsfred. Abasebenzi / abanini abanobubele Enkosi ngesidlo sangokuhlwa esihle
5/5 5 kwiinyanga ezidlulileyo
Besilambele ipitsa xa sasiseJärnforsen. Umniniyo wayemhle nyani, ezibuza kancinci ukuba sivelaphi kwaye wabuza ukuba sifuna ukubukela iTV. I-pizza yayilungile ngenene. Ibhakwe kakuhle kwaye intlama elungileyo.
Maud Ukuqwalaselwa kwakhona
Ukutya okuphezulu okuphezulu. Abasebenzi abahlobo.